News - LSR mmiri mmiri silicone ebu ngwa
A na-edebiri gel silica gel dị ka LSR, nke bụ ngwaahịa nke ndị ahịa na ndị na-emepụta ihe nwere ike ịkwado. A na-eji gel silica gel mmiri mmiri. Ọ nwere ezigbo elasticity, waterproof na mmiri na-eguzogide, na-eguzogide ọgwụ acid, alkali na ndị ọzọ na chemical bekee. A na-ejikarị ya edochi ngwaahịa plastik kwa ụbọchị.
Liquid silicone roba injection ịkpụzi technology (LIM) bụ a ọhụrụ na oru oma silicone roba ịkpụzi usoro mepụtara na njedebe nke 1970s. Ọ na-agwakọta magburu onwe arụmọrụ mmiri mmiri silicone roba na akụrụngwa nwere ike n'ụzọ ziri ezi na stably zuru ọgwụ ịkpụzi. E guzobere ụdị ọhụrụ nke silicone roba ịkpụzi na nhazi teknụzụ chọrọ naanị ihe abụọ (nke nwekwara ike ịgụnye ihe enyemaka dịka agba agba) na akụrụngwa, na usoro si na nri, metering, agwakọta na ịkpụzi zuru oke. Teknụzụ nhazi a nwere ike imezu ebumnuche nke ime ka usoro ahụ dị mfe, belata oge nhazi, ịchekwa ihe, ma melite arụmọrụ. Onweghi oke ihe ojoo na usoro mmeputa, nke bara uru na nchedo gburugburu ebe obibi.
A na-ekewa usoro ịkpụzi ọgwụ niile n'ime akụkụ ndị a:
Nkeji mbu bu igwe metering na nri, nke na-atụle n'ụzọ ziri ezi ihe abụọ nke mmiri silicone roba mmiri kpọmkwem site na gbọmgbọm nkwakọ ngwaahịa n'ime sistemụ site na mbadamba hydraulic;
Nke abụọ unit bụ agwakọta unit. Abụọ mmiri abanye usoro na-n'ụzọ zuru ezu agwakọta uniformly site a static igwekota, na ọ dịghị egosipụta na-ada n'ime usoro;
Nke atọ bụ ọgwụ ịkpụzi unit. The mbuaha silicone roba ihe onwunwe na-quantitatively agbara n'ime ebu site na ọgwụ unit, na evenly kesaa ọ bụla oghere, na mgbe ahụ thermally vulcanized. Usoro niile a na-akpaghị aka, ọ nweghịkwa njikwa aka ọ bụla nwere ike imezu mgbe ịtọchara ntọala iji melite arụmọrụ mmepụta.
Ihe mgbochi nke arụmọrụ LSR
LSR nwere ọtụtụ uru, o kwesịrị inwe atụmanya sara mbara na ahịa. Mana dịka teknụzụ nke onye nrụpụta ugbu a, LSR anaghị enwe mmekọrịta ọfụma, nke gụnyere na mmachi nrụpụta ọrụ. Banyere mmepụta arụmọrụ, ị nwere ike izo aka na ọnụ ọgụgụ ndị na-esonụ. Ihe mejuputara ya bu ihe ngosiputa ya na ihe nke B nwere ihe jikotara ya. Mgbe agwakọtara 1: 1, a na-agbanye ya n'ime ebu site na nkedo pụrụ iche na vulcanized n'ime elastomer na nnukwu okpomọkụ, wee gwọọ ya na ebu. akpụ.
Isi nsogbu dị ugbu a gụnyere:
1. Thegwọ ọgwụgwọ nke ihe ahụ n’onwe ya bụ 5-8S / mm, nke na-egbochi mmepụta ịkpụzi ọgwụ na ọsọ ọsọ.
2. silicone mmiri mmiri nwere nnukwu mmiri mmiri tupu ịgwọ ya, ọ dịkwa mfe iji mepụta ọkụ n'oge usoro ịkpụzi ọgwụ, nke chọrọ nnukwu ihe achọrọ na nhazi nhazi nke ebu na izi ezi nke igwe ịkpụzi ọgwụ.
3. Liquid silicone ngwaahịa dị nro, ngwaahịa ahụ ga-agbasawanye na olu n'oge usoro ọgwụgwọ ahụ, ma belata na olu mgbe obi jụrụ, nke na-akpata nnukwu nsogbu na nhazi ngwaahịa n'oge mmepụta akpaaka.